Safarkii aan la hilmaami karin - Soo Bandhigida Xaqiiqada
Abdi oo 18-sano jir ah waxa uu soo tahriibay 2014.
Isagoo sabab uga dhigay xaalada adag ee Somalia iyo dagaalada ayuu go’aansaday in uu socdaalo. Abdi keligiis ayaa Somalia ka soo baxay isagoo reerkiisa ka soo tagay si uu u galo Yurub. Inkastoo reerkiisu ay ogolaadeen in uu tahriibo ayaysan ka war hayn qataraha la xiriira tahriibka.
“Waa fududahay in xiriir lala sameeyo muqalasiinta Somalia maadaama ay jiraan dad badan oo arimahaan ka shaqeeya” Ayuu yiri.
Isagoo caawimaad ka helaya muqalasiinta ayuu ka soo gudbay xuduudaha Ethiopia ka dibna Sudan oo sidaas ku galay Libya.
Abdi waa maqlay dhibaatooyin badan oo ku dhacay dadka ku dhex safray Libya.
“Dad badan ayaa lagu qashay halkaasi, waxaa lagala baxay keliyaha iyo xubno kale” ayuu yiri. “Tuugo badan ayaa ku nool halkaasi balse mahad Allah ayaa iska leh anigu waa ka badbaaday balse waxaan gacanta u galay muqalasiin Libyan ah oo xaasidiin ah” ayuu ku daray.
Inkastoo uu dareemayo nasiib wanaag maadaama uu ka badbaaday dhibaatooyinka qaar uu maqlay, hadana safarkii Libya waxa uu noqday mid aad uga adag sidii uu rajeynayay.
“Maalin ayay nagu hayeen qoraxda kuleylkeeda. Aad ayay u kululeyd oo xitaa shimbiraha ayaa cirka ka soo dhacay. Kuleylka dartiis qaar ka mid ah asxaabteyda ayaa wadnaha istaagay” ayuu yiri Abdi.
Halkaan abdi waxa uu kaga waramayaa safarkii Libya.
Habeenkii ay Abdi iyo 80 kale oo soo galooti ah ay u baxayeen Yurub, waxaa la saaray doon bac ka samaysan taasoo la buufiyay safarka ka hor. Safarkaas oo ay filayeen in uu noqdo mid fudud oo qaadanaya saacado yar ayaa qaatay sadex maalmood oo ay badda ku jireen.
“Muqalaska Libya ayaa noo sheegay in aan afar saac u wadno doonta jihadaas ka dibna afar saac oo kale aan u wadno jiho kale inagoo markaas Yurub gaari doona” ayuu yiri Abdi.
Kooxda ayaa la siiyay jiheeye loo sheegay in uu geynayo Malta iyo moobeel lacag ku jidho. Maalintii sadexaad ee ay badda ku jireen, ayay go’aansadeen in ay telefoonka wacaan balse ma uusan shaqayn.
“Ma jirin cid na caawinaysa” ayuu yiri. “waan iska sabaynaynay bartilmaameed la’aan anagoo sugaynayay dhimasho.”
Ugu dambeyntii, waxay caawimaad ka heleen Malta. Ugu horeyntii, Malta waxay u soo jeediyeen in ay shidaal ugu shubaan doonta oo ay Talyaaniga u sii gudbaan maadaama ay doontu wali shaqaynaysay isla markaana Malta ay dadku ka bateen. Balse soo galootigu markii dambe waxay ka dhaadhiciyeen dowlada Malta in ay qaabilaan.
Markii ay Malta soo galeen, Abdi iyo dadkii doonta la saarnaa waxaa la geeyay xero. Abdi halkaasi waxa uu ka dalbaday magangalyo caruureed isagoo markii dambe laga sii daayay xerada. Inkastoo la qaabilay codsigiisa hadana lama siin sharci, si uu sharci u helo waa in uu gaaraa 18 sano. Nolosha Malta ayaa Abdi la noqotay mid adag isagoo go’aansaday in uu isaga tago isagoo ku wajahan Norway. Isagoo caawimaad ka helay muqalas, ayuu Abdi raacay diyaarad u socota Norway oo taransit ku ah Sweden. Nasiib daro, Abdi waxaa lagu qabtay Sweden.
Maanta Abdi waxaa uu ku noolyahay Sweden isagoo aan wali ku guuleysan in uu xiriir la sameeyo qoyskiisa oo ka guuray halkii ay deganaayeen. Codsigiisa magangalyada ayaan wali la aqbalin isagoo ku nool xaalad aan la hubin.
Yurub waxay noqotay mid ka fog midii uu filayay.
Maadaama uusan sharci lahayn ayay nolosha ku adkaatay Abdi isaga oo aan waxba qabsan karin. Maalmaha ayuu ku dhameeyaa in uu qaato casharo luuqada Swedish-ka ah ama in uu ciyaaro kubada. Mararka qaarkood waxba ma qabto. Waxaa uu si joogto ah uga walwalayaa hooyadiis iyo walaalihiis oo Somalia ku nool oo uusan xiriir la samayn. Waxa uu sidoo kale ka walwalayaa mustaqbalkiisa oo mugdi ah. Ma hubo in Sweden laga siin doono sharci iyo in kale isagoo lagu wargaliyay in lagu celin karo Somalia.
“Noloshayda maanta waa fiicantahay, oo shalay maanta ayaa ka fiican” ayuu yiri Abdi. “Mararka qaar waan ka shalaayaa in aan qaatay go’aanka tahriibka Europé aniga oo aan ka fiirsan, waxay ii noqotay cashar” ayuu ku daray.
Taariikhda wareysiga: 13 April 2016 | Taariikhda la badalay: 29 July 2016 |